Saameynta Caalamku ku yeeshay Kobaca Dhaqaalaha – USE24 GLOBAL MANAGEMENT COSULTANT
Caalamiyeynta ujeedadeedu waa inay ka faa’iideysato dhaqaalaha shaqsiyadeed adduunka oodhan iyadoo suuqyada kadhigeysa mid wax ku ool ah, kordhinta tartanka, xaddidid dakhilaafaadka milatariga, iyo baahinta hantida sisiman.
Faa’iidooyinka Globalisation-kaDhaqaalaha Adduunka Machadka Milken ee “Globalisation of the World Economy” warbixintiisii ​​2003 waxay iftiimisay faaiidooyin badan oo laxiriira wadashaqaynta aduunka ayagoo soobandhigaya qaarka mid ah khataraha la xiriira ee dawladaha iyo maalgashadayaashu ay tahay in ay tixgeliyaan, mabaadi’da warbixintana wali way khuseysaa.
1 Qaarka mid ah wax tarka ay leedahay caalamiyeynta ayaa waxaa ka mid ah:
Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda:
Maalgashiga tooska ah ee Dibadda (FDI) wuxuu u eg yahay inuu kordhoh ee raad uga weyn kororka ganacsiga adduunka, wuxuu gacan ka geysanayaa kobcinta tikniyoolajiyada, dib u habeynta warshadaha, iyo kobaca shirkadaha adduunka.
2 Cusbooney siinta Tikniyoolajiyadda:
Kordhinta tartamada caalamiga ah waxay gacan kageysaneysaa dhiirrigelinta horumarka tikniyoolajiyadda cusub, gaarahaan kororka FDI, taasoo gacan ka geysaneysa hagaajinta wax soosaarka dhaqaalaha iyadoo kadhigay sahabab wax ku ool ah.
3 Dhaqaalaha Miisaanka:
Caalamiyaynta waxay awood u siineysaa shirkadaha waaweyn iinay ogaadaan dhaqaalo baaxadleh oo yareeya kharashka iyo qiimaha, taas oo iyaduna taageerta koboc dhaqaale oo dheeri ah.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay dhaawici kartaa ganacsiyada yaryar ee badan oo iskudayaya inay ku tartamaan gudaha.
4 Qaar ka mid ah halista kajirta caalamka ayaa waxaa ka mid ah:
Isku-tiirsanaanta umadaha waxay sababi kartaa deganaansho la’aan heer gobol ama mid caalami ah haddii is-beddelka dhaqaalaha maxalligaahi uu ku dhammaado saameyn kuyeelashada dalal badan oo iyaga ku tiirsan.
Madax banaanida Qaranka: Qaar waxay u arkaan kor u kaca dawladaha, shirkadaha caalamiga ama kuwa caalamiga ah iyo ururada kale ee caalamiga ah inay khatar ku yihiin qaranimada.
Ugu dambeyntiina, tani waxay u horseedi kartaa hoggaamiyeyaasha qaar kood inay noqdaan kuwo waddani ah ama ajaanib neceb.
6 • Qaybinta Sinaanta:
Faa’iidooyinka isu-keenidda dunidu waxay si aan caddaalad ah ay nugule exankaraan ummadaha ama shakhsiyaadka hodanka ah, iyagoo abuuraya sinnaan-darro dhaqaale oo weyn.
7.Isaga oo wax ku qoraya Dib-u-eegista Machadka Milken ee saddexdii biloodba mar dabayaaqadii 2017, DaniRodrik, oo ah qoraa “Wadahadal Toos ah oo ku saabsan Ganacsiga:
Fikradaha Dhaqaalaha Adduunka ee Sane,” wuxuu ku dooday in dib-u-isu-dheelli tirnaanta caalamiga ah ay laga mamaarmaan tahay in la soo celiyo cod badan oo xagga shaqada ah iyo baahiyaheeda shaqo xasilloonida dakhliga iyadoo diiradda la saarayo adduunka oo dhan halka lagagaaro guulaha dhaqaale ee ugu weyn.
8 Canshuuraha iyo noocyada kale ee Ilaalinta Dhibaatadii dhaqaale ee 2008 waxay keentay in siyaasiyiin badani su’aal kakeenaan mudnaanta caalamiyeynta. Sida lagasoo xigtay falanqaynta Machadka Caalamiga ah ee McKinsey ee xogta kasocota Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta (IMF), caasimada xuduudaha ee xuduudaha ayaa qulqulaya 65% intii u dhaxeysay 2007 iyo 2016.
Hoos u dhaca kayimid $ 12.4 trillion ilaa $ 4.3 trillion sagaalkaas sano waxaa ka mid ah hoos u dhaca amaahda, FDI, iyo sinaan iyo wax iibsiga curaarta.
Mareykanka iyo Yurub waxay soo saareyn sharciyo cusub oo bangiyada oo xadidaya so codka raasumaalka, canshuuraha ayaa la dejiyay waqtiyo si loo ilaaliyo warshadaha gudaha ee loo arko inay muhiimyihiin, sida 127% canshuuraha Mareykanka ee kusaabsan waraaqaha waraaqaha Shiinaha ama canshuuraha 778% ee bariiska la soodhoofiyo.
10 Gudaha Brazil – halka canshuuraha badeecadaha laga soodejiyo ay u dhexeeyaan 10% ilaa 35%
11 — dowladda cusub ayaa ku dhawaaqday bishii Meey 2019 inay qorsheyneyso inay ku yareyso 10 boqolkiiba dhibcaha illaa 2023.
12 Doorashadii 2016 ee Donald Trump ee Mareykanka iyo codbixintii
Ingiriiska ee ka bixitaanka Midowga Yurub (oo loo yaqaan Brexit) ayaa sidoo kale gacan kageystey dhaq dhaqa aqalidka ku ah caalamiyeynta.
Isbedeladaan waxaa keenay dareenka diidmada soogalootiga eeYurub, in kasta oo natiijooyinka doorashada 2018 ay kadoorbidayaan kahortagga caalamiyeynta.
Muuqaalka Mustaqbalka Dhaqaale yahannadu waxay soojeedinayaan in maalmahan, maalgashiga xudduudaha aan laga samey nin wax badan si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha maadaama ay raad sanayaan waddamada leh canshuuraha ugu hooseeya.
Nooc ka mid ah caalamiyeynta ayaa laga yaabaa inaan laga fursan muddada dheer, laakiin kuuskuus taariikhi ah oo ay keeneen xiisado dhaqaale iyo cawaaqibyo kale ayaa soo jeedinaya in isbeddelku yahay kankeliya ee lagu kalsoonaan karo.
Sida laga sooxigtay Canshuuraha iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka, canshuuraha Mareykanka ee soodejinta Shiinaha ee kordhay waxay kor u kaceen $ 20.8 bilyan illaa bartamihii bishii Juulaay 2019.
Beeraleyda Mareykanka ee ay wax yeellada u geysatay Shiinaha ee leexsiga u iibsiga dalagyada dalal kale ayaa loo ballanqaaday $ 28 bilyan oo magdhow ah oo federaal ah, taasoo kadhigeysa guud ahaan khasaaro net ah.